ဇမ္ဗုဒီပါ, ယမုနာနှင့် အသောကခြေရာများ (၄) | နတ္ထိ
« Blogအက္ခရသညာတော (၃)
ငြိမ်း in one »
ဇမ္ဗုဒီပါ, ယမုနာနှင့် အသောကခြေရာများ (၄)
သုဝဏ္ဏပဗ္ဗတေ ရဇတပဗ္ဗတေ စရိတွာ၊
ဇမ္ဗုဒီပံ ပဒက္ခိဏံ ကတွာ၊
ရွှေငွေရောင်လျံ တောင်မြင့်မိုရ်၌ ကျင်လည်
ယမုနာမြစ်သည် Kata Patharရွာလေးမှ ၁၀ကီလိုမီတာနီးပါး ဆက်၍ စီးဆင်းသွားသည့်အခါ Kalsiရွာကို ရောက်သည်။ Kalsiသည် Uttarkhanပြည်နယ်၏ မြို့တော် Dehradunမှ ၅၀Kmခန့် ဝေးသည်။ တောင်ရိုးလေးပေါ်ရှိ ရွာလေးသည် မြို့ကြီးများကဲ့သို့ ဆူညံပွက်လောရိုက်မနေဘဲ ငြိမ်သက်နေသည်။ ထူးထူးထွေထွေ ရှာနေစရာမလို။ ရွာဈေးလမ်းနံဘေးတွင် အသောကကျောက်စာလမ်းညွှန် ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လမ်းကျဉ်းလေးအတိုင်း ဆင်းသွားရာ ကျောက်စာတိုက်ကို သပ်ရပ်သန့်ရှင်းနေသော ပန်းခြံလေးအလယ်တွင် တွေ့လိုက်ရသည်။ နေရာလေးက ငြိမ်းအေးသည်။
ကျောက်စာတိုက်ထဲတွင် ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနက တာဝန်ယူထိမ်းသိမ်းထားသော Kalsi Rock Edictဟု ခေါ်ကြသည့် ကျောက်စာကြီး ရှိနေသည်။ Mr. Forrestက ၁၈၆၀တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၁၂တွင် ပြည်နယ်အစိုးရမှ ကျောက်စာတိုက်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သည်။ ကျောက်တုံးကြီးသည် အမြင့် ၁၀ပေ အလျား ၁၀ပေ အနံ ၈ပေခန့်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်ခြမ်းနှင့် ဘယ်ဘက်ခြမ်းတို့တွင် ဗြဟ္မဏီအက္ခရာ၊ ပရာကရစ်ဘာသာဖြင့် ကျောက်စာများ ရေးထိုးထားသည်။ အမှတ်စဉ် (၁)မှ (၁၄)အထိ ပါဝင်သည်ဟု အသောကကျောက်စာ ပညာရှင်များက ဆိုသည်။ (ကျောက်စာမူနှင့် ဘာသာပြန်များ)
ကျောက်စာတိုက်ထဲသို့ ဝင်ကြည့်၍ မရ။ မျက်နှာစာကိုမူ ဖွင့်ထား၍ ကျောက်တုံးကြီးကို ကောင်းစွာ မြင်ရသည်။ ကျောက်တုံးကြီး ရှေ့တွင် ရပ်လျက် ကျောက်စာများကို ဖတ်ဖို့ရန် စိတ်ကူး မရ။ ကျောက်တုံးကြီးရှေ့သို့ ရောက်ဖြစ်သည့်အနေအထားကိုပဲ အရသာခံဖြစ်သည်။ အလွန် ကောင်းမွန်သည့် မိတ္တူများနှင့် ဘာသာပြန်များ ရှိနေပြီးဖြစ်၍ အေးဆေးစွာ စာအုပ်ဖွင့် ဖတ်လျှင် ပိုအဆင်ပြေသည်။ ကျောက်တုံးကြီး၏ ညာဘက်ခြမ်းတွင် ဆင်ရုပ်တစ်ရုပ် ရေးထွင်းထားပြီး “ဂဇတမ”ဟု ရေးထားသည်ကိုမူ အလွယ်တကူ မြင်နိုင်သည်။
ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်မို့ လေးဘက်လေးတန် လှည့်ပတ်ကြည့်သည်။ ဤနေရာသည် ဟိမဝန္တာတောင်ပေါ်မှ စီးဆင်းလာသော ယမုနာမြစ် မြေပြန့်ပိုင်းသို့ သက်ဝင်ရာဖြစ်၍ ယမုနာဒွါရဟုဆိုနိုင်သည်။ ယမုနာမြစ်အစဖြစ်သည့် Yamunotriသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရာ လမ်းကြောင်းတွင် ခရီးတစ်ထောက် ရပ်နားရာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဟိမဝန္တာတောင်ခြေ ဇမ္ဗုဒိပ်၏ အနောက်မြောက်တံခါးဝတွင် အသောက၏ ဓမ္မဝိဇယလမ်းစဉ်ကို ခန့်ခန့်ကြီး ကြွေးကြော်ရာ နေရာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတံခါးမှ ဝင်လာသူများ တိုက်စည်တိုက်မောင်းသံကို တိုးတိတ်စေ၍ ဓမ္မအောင်သံကိုသာ ကြူးရင့်ကြဖို့ရာ သတိပေးသည့် နေရာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဆောင်းဦးမနက်ခင်း နေခြည်နုနုအောက်တွင် ယမုနာတောင်ကြားလွင်ပြင်သည် ဝိုးတိုးဝါးတား လှနေသည်။ ကျောက်စာတိုက် အရှေ့ဘက်ခြမ်း၌ လယ်ကွင်းများ ရှိနေသည်။ ကောက်ရိတ်ပြီးချိန် ရွာသားများ အလုပ်ရှုပ်နေကြသည်။ ကလေးတစ်ယောက် ကွင်းထဲတွင် ဆော့နေသည်။ မျိုးဆက်သစ်လေးသည် ရှေးဟောင်းကျောက်စာများကို စိတ်ဝင်တစား ရှိမည့်ပုံမပေါ်။ နောင်တစ်ချိန်တွင်မူ အသောက၏ ဓမ္မပြန်တမ်းများကို သူသိလာကောင်း သိလာနိုင်သည်။ ကျောက်တုံးကြီးကား စောင့်မျှော်လျက်ပင်။
ကျောက်စာမူ ၂စောင်ကို A. Cunninghamရဲ့ Inscriptions of Asokaစာအုပ်မှ ရရှိသည်။
This entry was posted on September 13, 2013 at 11:55 am and is filed under ခရီးသွား, ပုံရိပ်, အသောကကျောက်စာ, အသောကခြေရာ.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.